वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए! – Newsharpal24
June 4, 2021 adminLeaveaComment on वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए!
घर ठूलो भएर के गर्नु लाखौं ऋणमा डुबेको थियो, त्यस माथी बिहेको खर्चले थपिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न धौ धौ भयो। समय बित्दै गयो, छोरो जन्मियो, हुर्कँदै गयो। कहिल्यै खाली नबसि परिश्रम गरेर कमाएको पैसाले अब घर चलाउन गार्हो भयो, ऋणको सावाँ घटाउने त कुरै छोडौं। यी सबै कुराहरुको पीडा आफ्नो ठाउँमा थिए, उस्ले श्रीमतीको लागि बिहेमा किनेका गहनाहरु समेत नक्कली थिए ।
श्रीमतीले बैंक गएर पैसा निकालम भनेर हतार हतार श्रीमानलाई तानेर लान्छिन बिचरा उ केइ बोल्न सक्ने अवस्थामा नै हुँदैन, उ कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा पनि तेत्ती मेसो पाईराको हुन्न । जब बैंक पुग्छ उ छक्क पर्छ। श्रीमतिले एटिएम बाट पैसा निकाल्छिन। उ हेरेको हेरै हुन्छ, हस्पिटल पुगेर पैसा बुझाउछिन, सबै जना चिन्तित भइरहेको अवस्थामा एकैछिन पछि भित्रबाट डाक्टर आउँछन् । अनि बाबुमा निक्कै सुधार भएको र कुनै पनि खतरा नभएको कुरा सुनिसकेपछि सबै खुसी हुन्छन ।
अनि श्रीमतिले भन्छिन “हजुरको पीडा मैले बुझेको छु ,यो हजुरले नै पठानुभएको पैसा हो, मैले घरमा बस्दा मेसिन चलायर,फुर्सदमा अरुको मेला गएर तथा आईपरेका कामहरु गरेर अलिअली कमाउँथे , त्यसैले घर खर्च चल्थ्यो, हजुरले पठाएरको सबै पैसा मैले बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गर्थें , हजुरले नभने पनि घरको अवस्था मलाई राम्रो सँग थाहा थियो ।
अनि यो गहना नक्काली हो भन्ने पनि थाहा छ मलाई, हजुरलाई मैले नभनेको मात्रै हो , मेरो लागि सुन बहुमुल्य होइन , जुन दिन हामी एक भएका थियौं, अग्नि अनि हाम्रा सबै आफ्नाहरुलाई साक्षी राखेर हरेक सुख दुखमा साथ दिने भनेर कसम खाएका थियौं । त्यो दिन हजुर बाट पाएको यो उपहार चाहे जे सुकैले बनेको होस् । मेरो लागि हिरा मोति भन्दा कम छैन ।”